Cristiano Ronaldo ခေတ်လွန် ရီးယဲလ်ကို ဦးဆောင်မယ့်သူက Gareth Bale လား
31 Jul 2018 . 2:37 PM
အဓိက တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း ရီးယဲလ် Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်ရမယ့်တာဝန်က ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale ဆီ အလိုလို ကျရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဂါရတ်ဘေးလ်ကလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုခေတ်လွန် ရီးယဲလ်အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးဆိုတာ မှတ်တမ်းတွေအရ သိနိုင်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို မပါနိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာ ဂါရတ်ဘေးလ်က အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့လောင်းရိပ်ကို မိနေတဲ့အနေအထားလို့တောင် ပြောရမယ်။
ဂါရတ်ဘေးလ်နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ အတူကစားခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်တာကာလအတွင်း သူတို့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက် မပါတဲ့ပွဲက သိပ်တော့မရှိပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒို မပါဘဲ ဂါရတ်ဘေးလ်ကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲပေါင်းက (၂၇)ပွဲသာရှိခဲ့ပေမယ့် ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရလဒ်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က အားရစရာပါ။ အဲဒီ(၂၇)ပွဲမှာ ရီးယဲလ် အနိုင်ရခဲ့တာက (၂၁)ပွဲအထိရှိခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရပြောရရင်တော့ (၇၈)ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီ (၂၇)ပွဲမှာ ဂါရတ်ဘေးလ် သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးအရေအတွက်က (၂၂)ဂိုးအထိရှိခဲ့တာကြောင့် တစ်ပွဲပျမ်းမျှ (၀.၈၁)ဂိုးနှုန်းသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် တစ်ပွဲပျမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်း (၀.၄၆)ဂိုးထက်တောင် ပိုများနေပါသေးတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒို မပါနိုင်ရင် ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ပုံမှန်ထက် နှစ်ဆပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
တကယ်တော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုထက် ဂါရတ်ဘေးလ်က ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ ပိုနီးစပ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းက လီဗာပူးလ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲအပြီး ဂါရတ်ဘေးလ်က ပုံမှန်ကစားခွင့်မရတဲ့အတွက် ရီးယဲလ်ကနေ ထွက်တော့မယ်လို့ လူသိရှင်ကြားဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု စီရော်နယ်လ်ဒို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အတွက် ဂါရတ်ဘေးလ်ဟာ အရင်ကထက် ပိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်လို့ ရီးယဲလ်အသင်းမှာပဲ ဆက်ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒို ခေတ်တစ်ခု အဆုံးသတ်သွားချိန် ရီးယဲလ်ကို ဦးဆောင်သွားမယ့်သူက ဂါရတ်ဘေးလ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ လာမယ့်ရာသီမှာ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Cristiano Ronaldo ခတျေလှနျ ရီးယဲလျကို ဦးဆောငျမယျ့သူက Gareth Bale လား
အဓိက တိုကျစဈမှူး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့နောကျပိုငျး ရီးယဲလျ Real Madrid အသငျးရဲ့တိုကျစဈကို ဦးဆောငျရမယျ့တာဝနျက ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale ဆီ အလိုလို ကရြောကျလာခဲ့ပါပွီ။ ဂါရတျဘေးလျကလညျး စီရျောနယျလျဒိုခတျေလှနျ ရီးယဲလျအသငျးကို ဦးဆောငျနိုငျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီးဆိုတာ မှတျတမျးတှအေရ သိနိုငျပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို မပါနိုငျတဲ့ပှဲတှမှော ဂါရတျဘေးလျက အထငျရှားဆုံးဖွဈခဲ့ပွီး စီရျောနယျလျဒိုရဲ့လောငျးရိပျကို မိနတေဲ့အနအေထားလို့တောငျ ပွောရမယျ။
ဂါရတျဘေးလျနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ ရီးယဲလျအသငျးမှာ အတူကစားခဲ့တဲ့ (၅)နှဈတာကာလအတှငျး သူတို့နှဈယောကျထဲက တဈယောကျ မပါတဲ့ပှဲက သိပျတော့မရှိပါဘူး။ စီရျောနယျလျဒို မပါဘဲ ဂါရတျဘေးလျကစားခဲ့ရတဲ့ ပှဲပေါငျးက (၂၇)ပှဲသာရှိခဲ့ပမေယျ့ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ ရလဒျနဲ့စှမျးဆောငျရညျက အားရစရာပါ။ အဲဒီ(၂၇)ပှဲမှာ ရီးယဲလျ အနိုငျရခဲ့တာက (၂၁)ပှဲအထိရှိခဲ့ပွီး ရာခိုငျနှုနျးအရပွောရရငျတော့ (၇၈)ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိခဲ့တယျ။ ဒါ့အပွငျ အဲဒီ (၂၇)ပှဲမှာ ဂါရတျဘေးလျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးအရအေတှကျက (၂၂)ဂိုးအထိရှိခဲ့တာကွောငျ့ တဈပှဲပမျြးမြှ (ဝ.၈၁)ဂိုးနှုနျးသှငျးယူခဲ့တာဖွဈပွီး ရီးယဲလျကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ တဈပှဲပမျြးမြှသှငျးဂိုးနှုနျး (ဝ.၄၆)ဂိုးထကျတောငျ ပိုမြားနပေါသေးတယျ။ အဓိပ်ပါယျကတော့ စီရျောနယျလျဒို မပါနိုငျရငျ ဂါရတျဘေးလျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက ပုံမှနျထကျ နှဈဆပိုကောငျးတယျဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
တကယျတော့ စီရျောနယျလျဒိုထကျ ဂါရတျဘေးလျက ရီးယဲလျအသငျးနဲ့လမျးခှဲဖို့ ပိုနီးစပျခဲ့တာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့မလေတုနျးက လီဗာပူးလျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲအပွီး ဂါရတျဘေးလျက ပုံမှနျကစားခှငျ့မရတဲ့အတှကျ ရီးယဲလျကနေ ထှကျတော့မယျလို့ လူသိရှငျကွားဖှငျ့ဟပွောဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခု စီရျောနယျလျဒို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့အတှကျ ဂါရတျဘေးလျဟာ အရငျကထကျ ပိုလုပျပိုငျခှငျ့ရတော့မှာဖွဈလို့ ရီးယဲလျအသငျးမှာပဲ ဆကျကစားဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပုံပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒို ခတျေတဈခု အဆုံးသတျသှားခြိနျ ရီးယဲလျကို ဦးဆောငျသှားမယျ့သူက ဂါရတျဘေးလျဖွဈလာမလားဆိုတာတော့ လာမယျ့ရာသီမှာ စောငျ့ကွညျ့သှားရမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .